50 Tusaalooyinka 'farshaxanka waddada' | Abuurista khadka tooska ah
Waxaa jira waxyaabo yar oo ka fiican farshaxanka waddada, Midda ay tahay inaadan bixin dinaar si aad u aragto oo dadku ay u sameeyaan kiisas badan marar badan si naf hurnimo ah iyo sababta oo ah waxay jecel yihiin waxay sameynayaan, marka waxaan ka faa'iideystaa fursad aan kuugu sheego in farshaxan badan uu waddada ku yaal ( muusikada, wadada tiyaatarka, rinjiyeynta ...).
Waxa aan kaaga tagay boodka ka dib waa isku soo ururinta konton farshaxan dariiq oo saddex dhinac ah, ama waa isku mid, Naqshadeynta dariiqyada lagu sameeyo ee jilista jawi saddex-cabbir leh oo leh xaqiiqo aad u weyn.
3d farshaxanka waddooyinka ayaa maalmahan caan ka helayay Noocyo caan ah ayaa durbaba ka faa'iideysanaya xiisaha ay dadku u qabaan 3D sawir gacmeedyada si ay ugu abuuraan wacyigelin ku saabsan alaabtooda. Waxaad ku arki doontaa qaar dambe boostada. Qoraalka maanta, waxaan jeclaan lahaa inaan ku tuso qaar ka mid ah farshaxanka runta ah ee 3d Street ee aan la kulmay waxaanan u maleynayaa inaad adiguba jeclaan doontid. Liiska buuxa boodka ka dib
Webiga kulul. Ku dhowaad dhammaan waddada ayaa loo qaaday si loo abuuro dhulkan saameyn ku yeelashada. Farshaxan qurux badan! (adoo adeegsanaya Edgar Mueller)
Godka barafka. Ka taxaddar inaadan ku dhicin godkan weyn ee barafka ah! (adoo adeegsanaya Edgar Mueller)
Qalabka. Hadda waddada daadad baa saaran, rafku waa meesha kaliya ee aad ku laabato si aad dhinaca kale u aado. (adoo adeegsanaya Edgar Mueller)
Johnnie Walker oo ku sugan Taipei. Dunida hoosteeda ee Johnnie Walker. (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
God qarsoodi ah. Uma baahnid inaad ku dhex safarto adduunka oo dhan adigoo sahaminaya godad aan caadi ahayn - mararka qaarkoodna way kaa hooseeyaan. (adoo adeegsanaya Edgar Mueller)
Milicsi. Dadka ku jira qaybta kore ee sawirka waa dhab laakiin milicsigooda qaybta hoose ee sawirka ayaa la sawiray. (adoo adeegsanaya Kurt Wenner)
Duufaan. Oo halkan waxaa ku imanaya wareegga! (adoo adeegsanaya Kurt Wenner)
Musas. Sawir gacmeedkani wuxuu umuuqdaa mid duug ah, rinjiyeyn qadiimi ah, oo lamid ah sawir gacmeedyadii qarniyadii dhexe (adoo adeegsanaya Kurt Wenner)
Hole. Sawir kale oo muujinaya waxa ka dhacaya waddada hoosteeda. (adoo adeegsanaya Kurt Wenner)
Raaxeynaysa Raaxo. Rafaa weyn oo ku nasanaya wadada. (adoo adeegsanaya Kurt Wenner)
fardaha. Waa show lo'da, yee-haw! (adoo adeegsanaya Kurt Wenner)
Cadaadiska xafiiska. Sawir gacmeedkani wuxuu matalayaa nolol maalmeedka xafiiska caadiga ah, malaha? (adoo adeegsanaya Kurt Wenner)
Webi waalan. Kaliya xaji oo halkan ayaan tagnaa… Oh snap, ma aanan arkeynin ciriiriga webiga hoostiisa! (iyada oo loo marayo Julian Beever)
Baadi goobka. Ka soo bixida dhulka hoostiisa. Tani waxay umuuqataa mid macquul ah! (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
Deeqaha. Ice qabow 3D sawir nuurad ah "Grant ee". (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
smart. Kani waa sawir aad u weyn oo dhalaalaya kaas oo loo sameeyay "Smart". (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
Ciddiyaha. Hoog, tani way xanuunsan tahay! (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
Rinjiga Aasiya - Mumbai. Waa maxay waxani? Waa biyo-dhac midab leh! (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
EasyJet - Edinburg. Marka waa macquul inaad dib ugu laado xeeb, magaalada dhexdeeda. (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
Qubays kulul. Oo halkan waxaan ku leenahay qubeys kulul oo qof walba u furan! (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
Xeebta - Beerta Covent. Koob runtii macquul ah oo ka mid ah cappuccino. (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
Ford Mexico. (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
T-Com. (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
Orange. Quruxda hoose ee quruxda by Orange. (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
Shark 3D. (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
HDI. Ka taxaddar meesha aad dhigato gaarigaaga. (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
Treuhaus. 3D nuurad sawir sidoo kale wuxuu noqon karaa derbiga. (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
Carwo ku taal cologne. (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
Alice oo ku sugan Wonderland. Halka khiyaaligu xaqiiqada ka hor yimaado. (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
Pfizer. (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
Bukaresti - Romania 2009. Iska ilaali shilka gaariga, ama waa inuu shil galaa up. (iyada oo loo marayo Manfred Stader)
Duullimaadkii ugu weynaa adduunka. Duullimaadka ugu weyn adduunka wuxuu la kulmaa adduunka ugu yar buufin-buufin. (iyada oo loo marayo Julian Beever)
Batman iyo Robin gurmadka. (iyada oo loo marayo Julian Beever)
Qashinka biyaha. (iyada oo loo marayo Julian Beever)
Eiffel Tower Sand-Sawir. Taarikada Eiffel Artificial oo la dhisay iyadoo la isticmaalayo ciid. (iyada oo loo marayo Julian Beever)
Is-sawir gacmeed farshaxan leh dareeraha cabitaanka. Wuu is sawiray! (iyada oo loo marayo Julian Beever)
Khasnadaha. Ka helay hanti bartamaha magaalada! (iyada oo loo marayo Julian Beever)
Hangallee!. Taasi waa sax, caawimaduna way kusocotaa. (iyada oo loo marayo Julian Beever)
Spiderman. (iyada oo loo marayo Julian Beever)
Qaadashada qulqulka. Diyaar noqo, is deji, bood! (iyada oo loo marayo Julian Beever)
Biyaha. (iyada oo loo marayo Julian Beever)
Cirka. Waxay umuuqataa inaan leenahay jano hoosta inaga sidoo kale. (adoo adeegsanaya Tracy Lee Stum)
Tareenka. Halkan waxaa imanaya tareenka dhulka hoostiisa mara! (adoo adeegsanaya Tracy Lee Stum)
Biyo jidka ku jira. Sideen uga gudbaa tan? Su’aal adag (adoo adeegsanaya Tracy Lee Stum)
Ka baxsiga hooyada. Hooyo dhulka hoostiisa ayey ka koraysa! (adoo adeegsanaya Tracy Lee Stum)
Macbadka jaguar. (adoo adeegsanaya Tracy Lee Stum)
Beerta Medici. (adoo adeegsanaya Tracy Lee Stum)
Kubbadda Koleyga ee Aragtida Aragtida ah. Qof waa inuu qaataa kubbadaas wadada, ama laga yaabee inaysan qaadan. (waxaa sii mariyey Greg Lehman)
Qorraxda. Xayawaanka dhulka hoostiisa ka soo baxa. (waxaa soo mariyey Gregor Wosik)
Jack Daniels. (waxaa soo mariyey Gregor Wosik)
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 50 Tusaalooyinka 'farshaxanka waddada'
weyn. sawirada waxay umuuqdaan kuwa dhab ah
Ku jawaab orlando pacheco
Runtu waxay tahay dhammaantood inay wanaagsan yihiin oo aanan garaneyn midka aan dooranayo.
Kimberly taxane dijo
Waxay ila tahay wax run ah aniga super this farshaxan waan jeclahay
Jawaab Kimberly Sequera
Waxaan u muuqdaa mid dhab ah, faraskan, farshaxankan, maxaa yeelay waxaan jeclahay didujar cod ahaan